चार राज्यको मतगणनामा ट्रम्पको आपत्ति, अदालतले के गर्ला ? « Janata Samachar
चार राज्यको मतगणनामा ट्रम्पको आपत्ति, अदालतले के गर्ला ?
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १२:२८
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिकका उम्मेद्वार जो बाइडनले मतगणनामा अग्रता लिनथालेपछि अर्का उमेद्वारा रिपब्लिकनका डोनाल्ड ट्रम्पले मुख्य चार राज्यमा मतगणनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्। ट्रम्पले विस्कन्सिन, मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र जोर्जिआ राज्यमा मतगणनाका लागि कानुनी चुनौती दिएका हुन् ।
यस्ता छन् ट्रम्पका कानुनी चुनाैती:
मंगलबार देखिएका अनियमितताका आधारमा भन्दै ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले विस्कन्सिनमा पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रपतिले विस्कन्सिन राज्यमा पुनः मतगणना गराउनका लागि औपचारिक माग गर्ने ट्रम्पको चुनावी टोलीले बताएको थियो। घोषणा हुन बाँकी मतगणनाको परिणामले विस्कन्सिनमा ट्रम्प र बाइननबीच मतान्तर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारले पुनः मतगणनाको माग गर्न पाउँछन्। तर त्यस्तो मतगणनाको खर्च माग गर्ने उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्छ।
तर त्यस्तो पुनः गणना कहिले होला भन्ने स्पष्ट छैन किनकि अधिकारीले मतगणना परिणामको समीक्षा सम्पन्न नगरिकन त्यस्तो कार्य सामान्यतया शुरु हुन सक्दैन। त्यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न उक्त राज्यलाई नोभेम्बर १७ सम्मको समय छ।
ट्रम्पको चुनावी खेमाले मिशिगनमा जारी मतगणना रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। त्यहाँ मतपेटिका खोल्ने र गणना थाल्ने कार्यको सुरुआत गर्ने प्रक्रियाको अवलोकन गर्न आफूलाई अर्थपूर्ण पहुँच नदिइएको उनीहरूको दाबी छ। मिशिगनको डिट्रोइट शहरमा बुधवार दिउँसो त्यहाँको एउटा मतगणना केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउनु परेको थियो किनकी त्यहाँ केही विरोध प्रदर्शनकारीको एउटा समूहले मतगणना प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए।
डिट्रोइट फ्रि प्रेस पत्रिकाका अनुसार मतगणना केन्द्रको भवनभित्र पहिले नै २०० जना पर्यवेक्षकले मतगणना कार्यको अवलोकन गरिरहेका थिए।
ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले पेन्सिल्भेनियामा पनि अर्थपूर्ण पारदर्शिता कायम नहुन्जेलसम्म मतगणना रोक्न दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ। यहाँ राष्ट्रपतिले तीन अंकको अग्रता हासिल गरेका छन् तर अझै हजारौं मतगणना हुन बाँकी छ। यहाँको मुद्दा मतदानको दिनको छाप लागेका हुलाकमार्फत् मतदान गरिएका मतपत्रहरू तीन दिनसम्म ढिलो गरी प्राप्त भएमा पनि तिनलाई मान्यता दिएर गणना गरिने उक्त राज्यको निर्णयसँग सम्बन्धित रहेको छ। रिपब्लिकनहरूले त्यसविरुद्ध अपील गरेका छन्।
बुधबार बिहान सबेरै ह्वाइट हाउसबाट बोल्दै ट्रम्पले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको र यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजान तयार रहेको घोषणा गरेका थिए।
बाइपार्टीजन पोलिसि रिसर्च सेन्टर नामक संस्थाको निर्वाचन परियोजनाका निर्देशक म्याथ्यू वील भन्छन्, ‘कानुनी रूपमा सञ्चालित मतगणना प्रक्रिया रोक्नका लागि देशको सर्वोच्च अदालतसँग कुनै विशेष अधिकार छैन।’
ट्रम्पको चुनावी अभियान टोलीले मतगणना परिणामविरुद्ध दिइने कानुनी चुनौतीका क्रममा हुने खर्च जुटाउन दाताहरूसँग चन्दाका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्।
रिपब्लिकन न्याश्नल कमिटिकी अध्यक्ष रोना मकड्यानिएलले भनिन्, ‘यो लडाईँ समाप्त भएको छैन। हामी यसैमा छौँ।’ बाइडनको चुनावी अभियानका एकजना वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार बब बाउअरले कानुनी रूपमा भएको मतदानलाई अवैध तुल्याउन ट्रम्पसँग कुनै आधार नभएको बताएका छन्।
मध्य चीनको हेनानमा बाढी र डुबान, ५६ जनाको मृत्यु, पाँच लाख विस्थापित
काठमाडौं । मध्य चीनको हेनान प्रान्तमा वर्षापछिको बाढी तथा डुबानभएको छ । बाढी तथा डेबानका
अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मीको आक्रमणमा परी ३० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मीको हवाई आक्रमणमा परी ३० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका
चीनले लगायो ७ अमेरिकी नागरिक र विभिन्न संस्थामाथि प्रतिबन्ध
काठमाडौं । चीनले सात जना अमेरिकी नागरिक र विभिन्न संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनले
यस्तो छ टोकियो ओलम्पिक उद्घाटनमा १८०० ड्रोन उडाएर आकाशमा बनाइएको ग्लोब
काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिक २०२० जापानको राजधानी टोकियोमा हिजो औपचारीक उद्घाटन गरी शुरु भएको छ